CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara - Mould iray Outlet Double Outlet PP Hollow Building Template Production Line - CHINA JWELL Machinary Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara - Andalana famolavolana modely PP Hollow Building Template roa
Fotoana: 2019-05-16 Hits:
Làlan'ny famolavolana modely fanodinana dobo avo roa heny bobongolo iray
The tsipika famokarana lasitra avo roa heny PP famelabelarana endrika poakaty dia ny vokatra vaovao natombok'i Changzhou jwell takelaka Equipment Manufacturing Co., Ltd. miorina amin'ny tsipika famokarana tokana 915mm, izay manavao hatrany ary voamarina tsy tapaka. Izy io dia manome fahafaham-po ny vokatra avo lenta sy ny fanjifana angovo ambany, ary miaraka amin'izay koa, mahatratra ny fitoniana kalitaon'ny vokatra tsara indrindra.
1. Ny tsipika famokarana dia manana tombony amin'ny fivoarana avo, fanjifàna angovo ambany, fitehirizana ny faritra famokarana sy ny asa, ary ny vokatra isan'andro dia mety hahatratra mihoatra ny 1000.
2. Ny tsipika manontolo dia manana teknolojia mandroso, tsipika famokarana haingana, fitsitsiana angovo ary extruder mahomby, habetsaky ny extrusion avo, plastika tsara ary fitaterana milamina.
3. Ny endrika tsy manam-paharoa die, fametrahana takelaka, rafitra fihenan-tsasatra sy ny rafitra banga manome antoka ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha sy ny fametrahana ny extrusion, stable extrusion ary asa mety kokoa.
4. Famolavolana firafitra tsy manam-paharoa dia miantoka fa tsy miolakolaka ny velaran'ny vokatra ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fananganana ny malama.
5. Ny tsipika famokarana dia afaka mahatsapa ny sisiny roa na ny sisiny roa, ny fitaovana miaraka amin'ny nano-firaka ary ny lamina miovaova amin'ny lelafo eo ambonin'ny modely, ary manatsara ny fahombiazan'ny modely.
1. Miaraka amin'ny resina polypropylene (PP) ho fotony, ny vokatra dia sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana.
2. Malama sy malamalama ambonin'ny, vokany fanariana tsara; tsy misy fitrohana ny hamandoana, tsy misy fihoaram-pefy, tsy misy ahitra, fanitrihana maharitra anaty rano tsy misy fikafika, tsy misy bubble, fitoniana haben'ny takelaka.
3. Mora ny manodina, ny mitsangana ary ny marindrano dia azo ampifandraisina tsy ara-dalàna, mora ny demoulding, raha tsy miborosy ny demoulding agents, ny fikitika ny modely dia mety hianjera, hanafohezana ny ora fiasana, hitahiry ny herin'olombelona, ​​ary hanafainganana ny fizotran'ny tetikasa.
4. Ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly, ny fanoherana ny harafesina, tena mety amin'ny faritra amoron-tsiraka, toeram-pitrandrahana, ranomasina sy tohodrano ary fampiharana ara-teknika hafa, ny fampiasana sy ny fitehirizana dia tsy mila manao fitsaboana anti-harafesina, aza mandoto ny tontolon'ny beton.
5. Ny turnover dia azo ampiasaina mihoatra ny in-50, ary lava ny androm-piainana.
6. Ny vokatra maloto dia azo averina simbaina ary alefa indray, ary azo ampiasaina tsara ny akora efa voaodina. Raha ampitahaina amin'ny volavolan-kazo sy ny plywood volotsangana dia ambany ny vidin'ny vokatra fako ary azo ahena be ny vidin'ny fananganana.
HIVERINACHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line
NEXTCHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line CHINAPLAS2019 Tena tsara